Ungakwandisa njani ukubandakanyeka kwabaphulaphuli kunye nokufumana ingxelo | Martech Zone
Ukudala i-buzz ejikeleze ishishini kunye nokufumana abaphulaphuli ekujoliswe kubo banomdla kwiimveliso okanye iinkonzo zakho linyathelo lokuqala lokwakha uluntu oluthembekileyo. Ngexesha elifutshane, oku kungakhokelela ekwandeni kwezithuthi kunye nentengiso. Kwixesha elide, oku kunokuseka iqela labathunywa be-brand abasebenza kakhulu njengeqela labathengisi be-guerilla. Kuba ukuphumelela iintliziyo zedemokhrasi yakho kuxhomekeke kakhulu kuthethathethwano lwabaphulaphuli, kubalulekile ukusebenzisa ngokufanelekileyo ukuzibandakanya kwaye ufumane ingxelo. Nazi ezinye iingcebiso eziza kukunceda ukuba uzityumze kwaye wenze ishishini lakho likhule.
Ngamanye amaxesha, bonke abantu bafuna into encinci yokukhohlisa kunye nokukhohlisa okufihlakeleyo ukuze bakhuthazwe. Ngenxa yoko, ukuqonda amandla eefowuni ezenzweni kunye nokuzenza kunokukhawuleza ukuphucula ukubandakanyeka kwabaphulaphuli. Xa usenza umxholo wentengiso, kubalulekile ukuba wenze umsebenzi wakho onzima ngokudibanisa uhlobo oluthile lwefowuni kwisenzo ukuze abaphulaphuli bakho bathathe inyathelo elilandelayo. Oku kunokuba kuphendula kumbuzo ekupheleni kweposti yebhlog ukuze kuvuse ingxoxo okanye ukufumana iindwendwe ukuba zibhalisele i incwadana ye-imeyile ke unokwakha ubudlelwane obusondeleyo.
Xa usebenzisa umnxeba kwisenzo, kubalulekile ukuyibeka kwindawo efanelekileyo kwaye ulandele ukuqhubela phambili okunengqiqo. Kwiimeko ezininzi, oku kuya kubekwa esiphelweni somxholo emva kokuba unike ixabiso kunye / okanye uphendule umbuzo. Emva kokuba uzibonakalisile ukuba unolwazi kwaye uthembekile, abaphulaphuli bakho kufuneka bazive bekhululeke ngakumbi ngokuzibandakanya. Eli lixesha eligqibeleleyo lokufaka umnxeba wentsebenzo kwaye ufumane abantu ukuba banxibelelane kwinqanaba elithile.
Nangona umhlaba kunye nezenzo zeshishini ziye zazenzekela ngakumbi kwaye azenziwa zobuqu kumaxesha akutshanje, uninzi lwabantu lusalangazelela ukubanjwa ngumntu. Nokuba sele sihambele phambili kangakanani kwezobuchwephesha, ishishini elilungileyo lijolise ikakhulu kubudlelwane kunye nokwenza unxibelelwano nabathengi. Kungenxa yoko le nto ukuvumela ubuntu bakho ukuba bukhanye kumxholo wakho kwaye nokuba ngumntu kulunge kakhulu. Endaweni yokuzifihla emthunzini, kungcono ukuba ubonakale kwaye ubenze babenolwazi ngakumbi kwinqanaba lomntu. Oku kunokwenziwa ngeendlela ngeendlela:
Sebenzisa ithoni yobuhlobo xa usenza umxholo
Ukuphepha i-jargon enobunzima obungaphaya kokungaqondwa ngabaphulaphuli bakho
Ukuzama ukuba ungafikeleli njengokuzenzisa
Ukuphendula ngokukhawuleza kwizimvo nakwimibuzo
Ukuphuhlisa isitayile esahlukileyo esikwahlula kubakhuphiswano
Unokufuna ukubandakanya imifanekiso embalwa yakho kunye namalungu eqela athatha inxaxheba kwimisebenzi engaphandle kweshishini. Ngokuvumela abaphulaphuli bakho ukuba bakwazi kwinqanaba lobuqu ngakumbi, ukwakha ubudlelwane kufanele kube lula kakhulu kwaye ukubandakanyeka kufuneka kunyuke ngokwendalo.
Yiba kuyo yonke indawo
kunye 56 ekhulwini Yabantu abasehlabathini basebenzisa uhlobo oluthile lwamajelo onxibelelwano, akukaze kube lula ukufikelela. Ngokwenza ukuba kube lula kubalo lwabantu ukufumana ishishini lakho kwaye uhlale uhlaziyiwe, ungabagcina benxibelelana rhoqo. Oku kunokufezekiswa ngokuqhuba okrelekrele Iphulo lokuthengisa kwimidiya yoluntu nokusebenzisa iisayithi ezahlukeneyo. Ukubakho kwiindawo ezininzi kubalulekile kuba kukuvumela ukuba ufikelele kwipesenti enkulu kubaphulaphuli bakho. Oku kuseka uthungelwano lwazo zonke izinto ezibandakanya ubukho kwi-Intanethi ezincedo ekuphawuleni. Ngaphandle koko, ukunamathela kwinethiwekhi enye okanye ezimbini kunokunciphisa ifuthe kunye nokuzibandakanya.
Xa uqala, uninzi lwamashishini luqala ngokhetho olusengqiqweni kunye nokwenza iiprofayili kuFacebook nakuTwitter. Ukuba ujonge ukunxibelelana nabanye oosomashishini, i-LinkedIn kunye neGoogle + ziluncedo. Ukuthengisa umfanekiso we-centric, iPinterest, i-Instagram kunye neTumblr lukhetho olufanelekileyo. I-YouTube ilungele ukudibanisa iividiyo. Kukho iindawo zokubhukisha zentlalo ezinje ngeReddit, iStumbleupon kunye neDigg ezinokuthi zithathe inyathelo elinye ukuya phambili.
Fumana abaphulaphuli bakho kwiNtshukumo
Abantu banomnqweno wemvelo wokubandakanywa, ngenxa yoko ukusebenzisa lo mnqweno kunokuba luncedo. Umzekelo, ukukhuthaza abafundi ukuba bachaze iposti yebhlog kwaye baqale ingxoxo banokuseka inqanaba lokubandakanya. Ukwenza njalo kubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye kuba ikuvumela ukuba unxibelelane nabafundi kunye nabafundi bakho ukuba banxibelelane. Kwangelo xesha, yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana ingxelo enexabiso.
Kwishishini elisekwe kwimveliso, unokucela abathengi ukuba bathumele imifanekiso yabo besebenzisa imveliso kwaye bayithumele kwiwebhusayithi yakho okanye iiprofayili zemidiya yoluntu. Olunye uluvo kukhuphiswano apho ophumeleleyo afumana ibhaso lemali, isigqebhezana okanye imveliso yasimahla. Umnini-venkile yokutyela unokucela abalandeli be-Facebook ukuba banike izimvo zohlobo olutsha lweedessert. Nabani na onika umbono okhethiweyo uya kuphumelela ibhaso lasimahla.
Ukuthintela umjikelo okhohlakeleyo weempazamo kwaye ubeke ishishini lakho kwindlela eya empumelelweni, kubalulekile ukuqhubeka ufumana ingxelo engakhethi cala kubaphulaphuli bakho. Ngelixa kusenokungasoloko kumnandi ukuva amagqabantshintshi, ukugxeka okwakhayo kunokukuxelela ngoluphi uhlengahlengiso ekufuneka ulwenzile. Kwelinye icala, amagqabantshintshi aqinisekileyo aya kukubonisa into oyenzayo ngokufanelekileyo ukuze uhlambe kwaye uphinde. Nazi ezinye izimvo zokufumana ingxelo.
Impendulo kwiBhokisi okanye kwiFomu
Olu lolona khetho luchanekileyo kwaye ilungile ekuboneni indawo ezinengxaki. Abasebenzisi beWordPress, zininzi iiplagi ezikhoyo eziya kuthi ngokukhawuleza zifake ibhokisi yempendulo okanye ifom. Ngokwesiqhelo, kufuneka zibekwe kwibar esecaleni njengewijethi okanye njengephepha ngalinye phantsi kwentloko yewebhusayithi. Abanye bavumela amagqabantshintshi alula, kwaye amanye antsonkothe ​​ngakumbi kwaye avumela abaphulaphuli bakho ukuba babeke amanqaku athile kwishishini lakho.
Uphando luyindlela elungileyo yokufumanisa ukoneliseka kubaphulaphuli bakho kunye nesiseko sabathengi. Zikwenye yeendlela ezilula kakhulu zokubona iipateni ezilungileyo nezingalunganga. Ngokusebenzisa iqonga njenge Uphando lweMonkey, Unokwenza uphando oluchazwe ngqo kwishishini lakho. Emva kokwenza isaveyi, ukuvota okanye iphepha lemibuzo, zinokuthunyelwa kubaphulaphuli bakho nge-imeyile, kuTwitter, ekunxibelelaneni nabathengi, njlnjl. Kuba abantu abaninzi benobomi obuxakekileyo kwaye abafuni ukugcwalisa uphando olude olunomoya omde, kuhlala kulungile ukuzigcina ilula ngaphandle kwemibuzo eli-10. Nangona, ngokuka KISSmetrics, uphando olufanelekileyo lunemibuzo emihlanu kuphela. Ngenxa yoko, kububulumko ukubuza kuphela imibuzo ephambili enokuzaliswa ngabantu ngokukhawuleza.
Okokugqibela, ukusebenzisa iqonga elinobuchule lokuhlalutya isimilo sabaphulaphuli kunokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo. Iqonga lokukhetha kumashishini amaninzi li google Analytics kuba isimahla, kulula ukuyisebenzisa kwaye ibanzi kakhulu.
Ibonisa inqwaba yedatha kubandakanya ulwimi lomsebenzisi kunye nendawo, imithombo yezithuthi, ukuba bahlala ixesha elingakanani abasebenzisi kwindawo yakho kunye nezixhobo ezisebenzisa abaphulaphuli bakho ukufikelela kumxholo. Inephepha elikwiphepha kubahlalutyi Oko kubonisa ukuba ngawaphi amalungu ewebhusayithi afumana olona nqakrazo.
Ubukrelekrele kweshishini kunye yokugcina idatha ziindawo ezimbini eziya zibaluleke ngakumbi, ngokunjalo. Ukuqokelela kunye nokuhlalutya idatha yempendulo yabathengi (kunye nokuziphatha komsebenzisi, ukucofa idatha, nokunye okuninzi) kubalulekile ekuchongeni iingxaki kunye namathuba, emva koko wenze imali kuwo.
Ngokwe-SEO, uGoogle Analytics ubonelela ngoluhlu lwamagama aphambili abasebenzisi abangene kuwo ukufumana umxholo wakho. Eli qonga likwaphula isiqwenga somxholo ngamnye ezantsi ukuze wazi ukuba zeziphi izithuba ezifumana ezona mbono. Ngokubeka yonke le datha kunye, unokufumana ingxelo ekhonkrithi yokunceda ekudalweni komxholo kunye nasekuthengiseni.
tags: ukuphuhliswa kwabaphulaphuliSocial Media Marketing
Lihloniphe Igunya Lam
Juni 6, 2013 ngo-7: 58 AM
ukusebenzisa iqonga elinobuchule lokuhlalutya isimilo sabaphulaphuli kunokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo.